Cloudimage.io: Cached, Cropped, Resized, ma ọ bụ Watermarked Images dị ka ọrụ | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya, anọ m ọrụ na saịtị a iji mee ọsọ ọsọ. Ewepụwo m otu tan nke akụkụ ahụ na-agagharị iji mee ka ọ dị mfe ma jikọta ya, mana ọsọ ọsọ saịtị ahụ ka dị oke nwayọ. Obi siri m ike na ọ na-emetụta ndị na-agụ akwụkwọ m na nke m nyocha ọchụchọ iru. Mgbe m rịsịrị enyemaka nke enyi m, Adam Small, onye na-agba ọsọ ngwa ngwa ikpo okwu ahia ala, Ihe mbụ ọ rụtụrụ aka bụ na enwere m ụfọdụ nnukwu onyogho na-ebuba na sidebar my Podcast.
Nke a na-agbagha ebe ọ bụ na ihe onyonyo a sitere na saịtị ndị ọzọ na enweghị m njikwa. Dị ka ọ dị, m ga-enwe mmasị ịkpụkọta ha ma chekwaa ha na mpaghara, mana mgbe ahụ, m ga-ede ihe jikọrọ ọnụ. Tohapụ ikwu nke ahụ, ọbụlagodi na njikọta siri ike, oge ọ ga-ewe iji budata ma gbanwee ihe oyiyi ahụ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya. Yabụ, mgbe m mere nyocha ụfọdụ n'ịntanetị, achọtara m ọrụ zuru oke - Igwe ojii.io
Njirimara nke Cloudimage.io
Na mbido onyonyo izizi, Cloudimage na - ebudata onyogho mbido gị maka ihe nkesa gị / S3, ma ha na-echekwa ya na akụrụngwa ha na-agbanwe.
Cloudimage.io nwere ike ịhọrọ nhọrọ, akuku, etiti, akara mmiri, wee kpokọta onyogho iji mee ka ọ zaghachi ma chekwaa oge gị.
A na-enyefe ndị ahịa gị ihe ọsọ ọsọ nke ọkụ site na CDN ngwa ngwa, na-ebute ntụgharị ka mma na ahịa ndị ọzọ.
Maka mmejuputa m, enwere m nri pọdkastị ebe m chọrọ igosipụta foto pọdkastị na naanị 100px site na 100px mana, mgbe mgbe, onyogho ndị mbụ buru ibu (na akụkụ na faịlụ). Yabụ - iji Cloudimage, anyị nwere ike ịtinye URL onyonyo ahụ na Cloudimage API, ma degharịa onyonyo ahụ ma debe ya n'ụzọ zuru oke.
https://ce8db294c.cloudimg.io/akuku /100 x 100 / x /https://images.fireside.fm/podcasts/images/c/c5d9b182-9c16-43a8-873d-ccc51c40dd8b/episodes/b/b638ca26-7bd9-4f6a-b039-99792720ff4a/cover.jpg
Rịba ama URL zuru ezu:
Token subdomain na CloudImage
Nye iwu ka ị daa onyinyo ahụ
Akụkụ setịpụrụ na 100px site 100px
My mbụ faịlụ ụzọ
Enwekwara m ike ịgbachi URL m ebe m nwere ike iji Cloudimage API ka ndị ọzọ ghara izuru ya. N'ime nkeji ole na ole, enwere m ihe ngwọta ahụ, n'ime oge awa m etinyejuputara azịza ya n'ime nke anyị Podcast ndepụta Wijetị.
Tags: ịwụigwe ojiimkpakọakukuetitiichikota ihe oyiyiimage mkpakọoyiyi croppingoyiyi resizingoyiyi watermarks3akarammiri mmirimmiri mmiri